Sidee baad maqli lahaa in aad door bidayso in Music on Apple Watch iyo waxa aad awoodi doonaan in ay dhegaystaan? Waxyaalahan oo dhan ayaa loo arkaa, in tiirsan dul watch aad model. Halkan waxaad ka heli doontaa dhammaan hawlaha kala duwan ee aad sameyn kartid adiga oo isticmaaleya isticmaale Apple Watch oo aan aaday in ay iPhone.
Qof kasta oo Apple Watch socda watchOS 4.1 ama wax ka sareeya aad awood u siin doona in ay dhegeystaan ​​ururinta iyo playlists dhigay on your iPhone . Waxaad sidaas oo kale habayn awoodo in codsiyada sida Spotify iyo iHeartRadio , sidii Apple Music (haddii aad tahay taageere).
An Apple Watch Taxanaha 3 ama Apple Watch Taxanaha 4 ordaya watchOS 4.1 ama wax ka sareeya samayn karto oo dhan kor ku xusan, weli waxaa sidaas oo kale awoodo la xidhiidha Apple Radio iyo music kasta oo aad isku aadiyo ilaa iCloud.
Iyadoo lagu daydo oo dheeraad ah cusbaynayaa kaliya ciyaari karo music by piggybacking aad iPhone, Taxanaha 3 iyo 4 Daruurtiina waxaa ka sii qulquli karaan music sharci ah. Sidee ku saabsan inaannu wax ka qaadannaa gander a at the habab kala duwan si ay Listen Music on Your Apple Watch .
1 Isticmaal Apple Watch for Music aan iPhone
Isticmaal Apple Watch for Music aan iPhone
Segue aad watch. Press Crown Digital si cigta si screen Home. Taabo arjiga Music ah. Laga soo bilaabo barta in, aad ku dhajisan karaa sawiirrada ee ururinta iyo playlists kala duwan. Dhanka kale, ADIGANA on marinka ee Library iyo tuubada on qaybta for Playlists, Artists, albums, ama Songs.
Waxaad markaa awoodi doonaan in ay weerar dadban ku dhex assortments ka beddelo aad watch. Taabo on ururinta a, playlist, saanac, ama laxan aad rabtid in aad bay maqlaan. You can control your music from your watch by tapping on the Play / Pause button, Korsiga in track soo socda, ama bootimaalaysiga in track ee la soo dhaafay. Waxaad sidaas oo kale la xakameeyo kartaa mugga by jeestay Crown Digital ah.
Read this article oo ay ku jiraan macluumaad dhamaystiran oo ku saabsan Sida loo Isticmaalka Apple Watch for Music aan iPhone . Halkan waxaad ka heli doontaa dhammaan hawlaha kala duwan ee aad sameyn kartid adiga oo isticmaaleya isticmaale Apple Watch oo aan aaday in ay iPhone .